Ikhaya | Ukubambisana kwe-MyCoolClass
IMyCoolClass iyin ukubambisana kothisha bamazwe omhlaba ngenkundla yabo yokufundisa online. We ukuxhuma othisha abahamba phambili abavela emhlabeni wonke nabafundi abathandekayo endaweni ejabulisayo, evulekile neyamasiko ahlukahlukene. Yini enye, we unikeza othisha ithuba lokuthi bangabanikazi bendawo yokusebenza.
Njengobambisene nabasebenzi, silandela imigomo eyisikhombisa ebekwe yi-International Cooperative Alliance. Singa ebhaliswe e-United Kingdom njengomphakathi kanye namalungu ama-Co-operatives UK.
Joyina i- # TEACHERREVOLT NAMUHLA
Nguwe umphathi. Ukhululekile ukuzakhela izifundo ngendlela yakho. Ulawula ukubhuka kwakho nohlelo lwakho bese uzibekela amanani akho.
Kulula ukuphatha abafundi kungxenyekazi yethu yokufundisa.
Ukwabelana ngesikrini, ukuphathwa kwamafayela, ukusetshenziswa kwebhodi elimhlophe, nokuhlelwa kwezinto ezilula kulula futhi kuyinkimbinkimbi. Ipulatifomu itholakala ngezilimi eziyi-10 njengamanje nokuningi kusendleleni!
Amaholo angcono, izinzuzo ezingcono kanye nokwenza izinto obala ngokuphelele.
Othisha bakhokha u-19% wemali abayithola nyangazonke ku-cooperative. Lokhu kuhlanganisa izindleko zokusebenza kanye nomnikelo esikhwameni jikelele ukusisiza sikhule. Ingxenye ye-19% nayo iya esikhathini sakho osikhokhile! Asinabo abaninimasheya abathatha ukusika. Njengelungu, ungumnikazi wenkampani futhi, futhi uthola umbono wakho ngokwenzekayo kunoma iyiphi inzuzo.
Othisha bazoqongelela izinsuku eziyisi-7 njalo ngonyaka zekhefu lokugula noma lekhefu elikhokhelwayo ngokuya ngomnikelo wabo kanye nomholo wosuku ojwayelekile. Sifuna othisha bazinakekele uma begula noma bathathe iholidi ngaphandle kokulahlekelwa yimali. Ungakhipha kuphela lokho okufakile.
Azikho izinhlawulo noma izinhlawulo ngokukhanselwa uma ugula noma unesimo esiphuthumayo.
Kwenzeka izinto ezimbi. Uma unesimo esiphuthumayo somndeni noma udinga ukuthatha izinsuku ezimbalwa zokuphumula, vele ukhansele amakilasi akho bese wazisa iqembu lokusekela.
Noma kunini, noma iyiphi indawo, noma kuphi
Ipulatifomu yethu isebenza noma ngabe ukuphi futhi nomaphi lapho umgwaqo kukuthatha khona. Konke okudingayo uxhumano lwe-inthanethi. Ipulatifomu yethu nayo isebenza eChina ngaphandle kwemingcele.
Usiza ukwenza izinqumo ezibalulekile.
Wonke uthisha uzokwazi ukufinyelela kuwebhusayithi yamalungu kuphela enikezelwe ku-co-op, ngolwazi lwezezimali, imithetho nemithethonqubo, imininingwane yokhetho, ukuvota, nokuningi. Noma yiliphi ilungu lingaphinde lingenele iBhodi Yabaqondisi.
Dala futhi uhlanganyele
Qala noma ujoyine Ithimba Lokudala futhi uthuthukise izifundo nabanye othisha. Thumela izifundo zakho ukuze zivunywe yiBhodi Yezemfundo bese iqembu lethu Lokwakha lizokwenza impilo yakho iphile! Wena nethimba lakho nizozuza imali ekhokhwayo lapho isifundo senu sesithengisiwe!
Siza labo abakudinga kakhulu
IMyCoolClass ihlela ukwethula uhlelo lokuhlinzeka ngokufundiswa kwamahhala ezinganeni ezazincishwe amathuba ngokwakha isikhwama esingenzi nzuzo.
Inkokhelo eguquguqukayo futhi esebenza kahle
IMyCoolClass inezindlela ezahlukahlukene zokukhokha ukuze uqiniseke ukuthi ukhokhelwa kahle ngangokunokwenzeka.
Bonke othisha bamukelekile.
Uma ukufanelekela ukufundisa izifundo ozifundisayo, wamukelekile. Asinandaba nokuthi ungubani, uvelaphi, uhlalaphi, nokuthi ukhuluma luphi ulimi. Ubandlululo alupholile futhi alunandawo kwezemfundo.
Uma uthanda lokhu esikwenzayo futhi ufuna ukukhombisa ukwesekwa njengoba sikhula,
iminikelo yakho iyaziswa.
Ipulatifomu Engumnikazi Wothisha I-Co-Op
Yebo, kunjalo !!! Bonke othisha baba ngabanikazi futhi babamba iqhaza enkampanini. Njengokubambisana, akukho "Big Boss" noma abatshalizimali abenza zonke izinqumo. Ilungu ngalinye lineqhaza enkampanini kanye nevoti elilinganayo.
Ukubambisana Phakathi Kwemifelandawonye
Ukubamba iqhaza kwezomnotho
Ikhefu Lomuntu Siqu Elikhokhelwayo
Azikho izinqubomgomo zeDraconia
XSisebenzisa amakhukhi kuwebhusayithi yethu ukukunikeza ulwazi olufanele kakhulu ngokukhumbula okuthandayo nokuphinda ukuvakasha. Ngokuchofoza u- "Yamukela Konke", uyavuma ukusetshenziswa kwawo WONKE amakhukhi. Funda kabanziIzilungiselelo zekhukhi Yamukela Konke
Ikhukhi ucezu oluncane lwedatha (ifayela lefayela lombhalo) ukuthi iwebhusayithi - lapho ivakashelwa ngumsebenzisi - icela isiphequluli sakho ukuthi sigcine kudivayisi yakho ukuze sikhumbule imininingwane ngawe, njengokhetha ulimi lwakho noma imininingwane yokungena ngemvume. Lawo makhukhi asethwe yithi futhi abizwa ngamakhukhi eqembu lokuqala. Siphinde sisebenzise amakhukhi avela eceleni - angama-cookies avela kusizinda esihlukile kunesizinda sewebhusayithi oyivakashelayo - kwimizamo yethu yokukhangisa nokumaketha. Sicela ubuke eyethu Inqubomgomo yobumfihlo ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuthi sisebenzisa kanjani amakhukhi.
Sisebenzisa amakhukhi ngezizathu eziningana ezifana;
ukusebenzisa izinto ezibalulekile zamawebhusayithi e-MyCoolClass,
_simpisi iminyaka 11 Le khukhi isetshenziswa yi-WPForms WordPress plugin. Ikhukhi isetshenziselwa ukuvumela inguqulo ekhokhelwayo ye-plugin ukuxhuma okufakwe ngumsebenzisi ofanayo futhi isetshenziselwa ezinye izici ezingeziwe njenge-addon ye-Form Abandonment.
_fbp 3 izinyanga Le khukhi isethwe yi-Facebook ukubonisa izikhangiso uma ngabe ziku-Facebook noma kwi-platform yedijithali enikwa amandla ukukhangisa kwe-Facebook, ngemuva kokuvakashela iwebhusayithi.
fr 3 izinyanga I-Facebook ibeka le khukhi ukukhombisa izikhangiso ezifanele kubasebenzisi ngokulandela umkhondo wokuziphatha komsebenzisi kuwebhu yonkana, kumasayithi ane-pixel ye-Facebook noma i-Facebook social plugin.
LAPHA Unyaka owodwa izinsuku ezingama-1 Amakhukhi we-Google DoubleClick IDE asetshenziselwa ukugcina imininingwane yokuthi umsebenzisi uyisebenzisa kanjani iwebhusayithi ukuyethula ngezikhangiso ezifanele nangokuya ngephrofayili yomsebenzisi.
test_cookie 15 imizuzu I-test_cookie isethwe i-clubclick.net futhi isetshenziselwa ukuthola ukuthi ingabe isiphequluli somsebenzisi siyawasekela amakhukhi.
yt-akude-axhunywe-amadivayisi ungalokothi Lawa makhukhi asethwe ngamavidiyo we-youtube ashumekiwe.
yt-kude-idivayisi-id ungalokothi Lawa makhukhi asethwe ngamavidiyo we-youtube ashumekiwe.
_ga_QB4KJ2NX1F iminyaka 2 Le khukhi ifakwe yi-Google Analytics.
KULUNGILE Iminyaka engu-16 izinyanga eziyi-3 izinsuku eziyi-26 amahora ayi-7 Lawa makhukhi asethwe ngamavidiyo we-youtube ashumekiwe. Babhalisa idatha engaziwa yezibalo ngokwesibonelo ukuthi ividiyo iboniswa kangaki nokuthi iziphi izilungiselelo ezisetshenziselwa ukudlalwa.Ayikho idatha ebucayi eqoqwayo ngaphandle kokuthi ungene ku-akhawunti yakho ye-google, uma kunjalo izinketho zakho zixhumene ne-akhawunti yakho, ngokwesibonelo uma uchofoza u- “like” kuvidiyo.